आधुनिक समाजमा, स्वास्थ्य को संरक्षण को समस्या झन् महत्त्वपूर्ण बन्ने छ। पर्यावरण र आनुवंशिक कारक, पुरानो तनाव र स्नायु तनाव, गरिब-गुणवत्ता र राम्ररी संगठित आपूर्ति प्रणाली: यसको कारण धेरै छन्। पछिल्लो कारण बिस्तारै, को Forefront हुँदैछ अरू सबैलाई धक्का। Nutritionists झन् भोजन को नियम संशोधन गर्न आवश्यकता बारेमा कुरा गर्दै छन्। यस लेखमा सूचीबद्ध गरिने पोषण लागि उत्पादन, वास्तवमा एकदम सरल र किफायती छ।
स्वस्थ मेनु बनाउने सरल नियमहरू
उत्पादनहरु पोषण लागि, nutritionists द्वारा अनुमोदित सूची, मुख्यतया सन्तुलित शरीर प्रोटीन, बोसो, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन र खनिज को सामान्य कामकाज को लागि आवश्यक छ आधारित छ। को किन हो आहार यसको संरचना मा उत्पादनहरु को एक किसिम को समावेश गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, के सबै विशेषज्ञहरु एकमत छन् - चीनी र चीनी सदृश मिठाई को खपत साथै, एक न्यूनतम गर्न राखिनेछ बोसो सेवन रूपमा हुनुपर्छ भन्ने छ। यी उत्पादनहरू एकदम सीमित परिमाणमा शरीर द्वारा आवश्यक छन्, ग्लुकोज र बोसो को एक अधिशेष फैटी तहहरू को रूप मा ऊतक को पछि सार्ने काम गर्न जान्छ। ठीक पोषक को सन्तुलित रकम शरीर मा चयापचय प्रक्रियाहरू क्रियाशीलता, त्यसैले सामान्य चयापचय मा एक प्रमुख भूमिका उचित आहार खेल्छ। उपयोगी उत्पादनहरु एक सूची खुला wholegrain। यी अनाज, चामल केहि प्रकारको समावेश durum गहुँ देखि पास्ता र पीठो उत्पादन गहुँको पीठो देखि।
परिचित अपरिचित को रहस्य: तरकारी र टेबल मा फल
को जीव तरकारी लागि धेरै उपयोगी। धेरै मानिसहरू तिनीहरूलाई अन्य व्यञ्जन गर्न एक वैकल्पिक साथै रूपमा perceiving, भिटामिन, microelements संग शरीर को संतृप्ति आफ्नो भूमिका हल्कासित नलिनुहोस्, त्यसैले तरकारी सतह बुझाउँछ। कम-क्यालोरी तरकारी, तिनीहरूलाई को संतृप्ति चाँडै कारण आफ्नो संरचना मा पर्याप्त पानी सामग्री र फाइबर गर्न आउँछ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। तिनीहरूले शरीर तिनीहरूले भिटामिन र खनिज समावेश सबै हुन्छ प्रयोग देखि Nutritionists, कच्चा तरकारी रुचि गर्न सुझाव दिन्छौं। स्वस्थ भोजन को आधारभूत नियमहरू लीन निर्णय गर्नेहरूका लागि आफ्नो दैनिक मेनुमा फल बेवास्ता नगर्नुहोस्। फल भिटामिन मा धनी खनिज छन्। प्रयोगको, शरीर गरेको प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोत्साहित गर्न मद्दत गर्छ उमेर बढन प्रक्रिया slows।
मासु र माछा, संरक्षित, आपूर्ति को संगठनमा आफ्नो भूमिका
मासु र माछा प्रोटिनको पर्याप्त रकम, जसमा शरीर को मुख्य भवन ब्लक छ। उच्चतम प्रोटिन सामग्री जस्तै कुखुरा, बाछाको मासु, मासु रूपमा दुबला मासु, मा रेकर्ड भएको थियो। पोषण को लागि उत्पादन गर्ने छनौट ती, सूची अनिवार्य र माछा समावेश गर्नुपर्छ। माछा व्यञ्जन सबै लाभदायक छन्। तिनीहरूले आधार आहार गठन। प्रोटिन शरीर Saturating, फस्फोरस, माछा पनि स्थायी रूपमा भोक को भावना हटाउँदछ।
एमिनो एसिड तरकारी मूल को प्रोटीन मा वर्तमान, कुनै तरिका अवस्थित पशु प्रोटीन गर्न कमसल मा। शरीर को सही एमिनो एसिड ब्यालेन्स लागि पर्याप्त प्रोटिन र तरकारी र पशु मूल आउनु पर्छ। किन nutritionists, विशेषज्ञहरु उचित पोषण लागि उत्पादन सूचीमा सिफारिस भटमास, दाल, सिमी, नट, शैवाल, मटर र सिमी समावेश छ। यी उत्पादनहरू सफलतापूर्वक, भाइरस बाट शरीर रक्षा कोलेस्ट्रल lowering, रगत शुद्ध मदत।
डेयरी उत्पादन - सुधार स्वास्थ्य को एक माध्यम
डेयरी उत्पादन पनि प्रोटिन मा धनी छन्। आफ्नो खपत को शरीर को लागि लाभ मासु र माछा को खपत देखि लाभ बराबर छ। Nutritionists कि सबै भन्दा उपयोगी कम बोसो हुनेछ भन्ने विश्वास : डेयरी उत्पादन दही, kefir, घरेलु पनिर। दूध प्रोटीन बाहेक शरीर क्याल्सियम ल्याउँछ। डेयरी उत्पादन को बोसो सेवन पनि उच्च थियो, र मेनुमा वैविध्यपूर्ण थियो पोषण लागि रोगी उत्पादन, यो सूची सही चयन विशेषज्ञहरु। डेयरी उत्पादन हरेक दिन आहार मा हुन, तर सानो परिमाणमा गर्नुपर्छ। दही, पनीर उपभोग, पनीरों एक दिन एक पटक भन्दा कुनै सिफारिस गरिएको।
मूल कुराहरु एक स्वस्थ आहार को
उचित पोषण को संगठन, तपाईं पहिलो तरकारी, फलफूल र अनाज आधारमा आहार बनाउनु पर्दछ। यी उत्पादनहरु हरेक दिन तालिका हुनुपर्छ छ। यो पनि कम से कम एक सानो गर्मी उपचार पछि ताजा अवस्थामा फल र तरकारी उपभोग गर्नुपर्छ। उत्पादन मात्र, ताजा अर्द्ध-प्रक्रिया र छिटो खाना आहार देखि बहिष्कृत गर्नुपर्छ रोजेको हुनुपर्छ।
विशेष ध्यान nutritionists उचित आहार योजना बनाउँदा, योग्य उत्पादनहरु सूची यो सबै खाना समूह समावेश यस्तो तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई मा जोड। आहार को अनुपालन अनुपात र विविधता - एक स्वस्थ आहार को उचित संगठनको मुख्य सिद्धान्त। तरकारी विशेष बन्दागोभी विभिन्न किसिमहरु को प्रयोग, बन्दागोभी उपयोगी गुण को एक नम्बर छ रूपमा, आधुनिक चिकित्सा अध्ययन यसको खपत एकदम क्यान्सर विकास को जोखिम कम गर्ने देखाएका छन् जबकि रुचि हुनु पर्छ।
उचित पोषण - शरीर शुद्ध एउटा तरिका
एक स्वस्थ र भन्ने तथ्यलाई उल्लेख छैन सन्तुलित आहार भोजन मात्र सुधार गर्न योगदान छैन, त्यसैले भन्ने तर पनि शरीर शुद्ध पार्छ प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। धेरै विज्ञापन आधुनिक माध्यम लागि वैकल्पिक उत्पादनहरु पोषण लागि बनाउन। सूची हरियो पत्तेदार तरकारी, लसुन, बन्दागोभी, शैवाल, बीट, अदुवा, खैरो चामल, तेल समावेश गर्नुपर्छ (शरीर शुद्ध, तपाईं यसलाई देखि कम्तिमा केही उत्पादनहरु खान आवश्यक)। पेय लागि जाँदा, प्राथमिकताको हरियो चिया, कागति र तरकारी बारे मा भूल छैन।
शरीर शुद्ध पार्नुहुन्छ सात दिनको लागि
धेरै मानिसहरू उपवास गर्न रुचि भन्ने तथ्यलाई बावजुद, समय शक्ति को सही संगठन मदत गर्नेछ छोटो अवधिमा शरीर शुद्ध। स्वस्थ भोजन को सिद्धान्त सम्मान, शरीर शुद्ध गर्न एक हप्ता गर्नुपर्छ। यो अवधिमा प्रयोगको लागि पनि उचित पोषण लागि खाद्य पदार्थ सिफारिस गरिएको छ। धेरै शरीर शुद्ध पार्नुभएर मा ध्यान खातामा लिएर समायोजित संग एक हप्ताको लागि सूची। समयमा यी सात दिन ताजा र स्थिर फारम, जोडी चीनी बिना प्राकृतिक रस, लगभग सबै तरकारी मा फल उपभोग गर्न अनुमति दिइएको छ। अनाज अनाज उपयुक्त, प्राथमिकताको हरियो, खैरो चामल, फलियां पनि उपयोगी हुनेछ। डेयरी उत्पादन मात्र दुबला सिफारिस गर्दै छन्, तर तिनीहरू सात दिन लागि अनिवार्य छ दैनिक प्रयोग गर्नुहोस्। हामी बारे बिर्सनु हुँदैन शासन पिउने: दिन को समयमा तपाईं पानी कम्तिमा आठ चश्मा एक दिन पिउन गर्नुपर्छ।
वजन सुधार विधि खानपान
एक स्वस्थ आहार छनौट, एक व्यक्ति यसरी शरीर, निको र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, रही अतिरिक्त वजन को छुटकारा को सफाई छनोट। यो मुख्यतया किनभने अनुमति उत्पादन, सामान्यतया कम क्यालोरी र सजिलै संग पचा लिया हुन्छ। सन्तुलित आहार को आधार उचित पोषण लागि खाद्य पदार्थ हो, वजन सूची खातामा क्यालोरी लिने समायोजित छ। वजन लागि मेनु बनाउन पर्याप्त सजिलो छ। यो अवस्थामा, कुनै विशेष उत्पादन आवश्यक छ। बोसो खपत न्यूनतम कम छ, तर तिनीहरूले पनि लक्षित वजन समयमा, सबै इन्कार गर्न आवश्यक छैन। तरकारी, फलफूल, जामुन, चोकर, केही अनाज: अधिकतम उत्पादन कि फाइबर समावेश संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ। विशेष गरी यो अवधि, अनाज को खपत, खैरो चामल महत्त्वपूर्ण। दिन को लागि मेनु बनाउने, तपाईं उत्पादनहरु को सही सन्तुलन खातामा लिनुपर्छ: दैनिक आहार अनाज, अनाज, तरकारी, फलफूल, दुग्ध उत्पादन समावेश गर्नुपर्छ।
अब तपाईं कसरी चयन गर्न थाहा स्वस्थ खाद्य पदार्थ उचित पोषण लागि। निम्नानुसार सबै माथि, खातामा लिएर सिफारिसहरू सूची छ:
कम बोसो डेयरी उत्पादन,
यो शरीर सफाई को प्रयोजन को लागि समायोजन र वजन कम गर्न सजिलो छ। एक स्वस्थ र सन्तुलित आहार अप चित्रकला को नियम थाहा यसलाई Suffice।
चीनी को सट्टा Fructose: मधुमेह को लागि एक राम्रो विकल्प
पाँचौ ग्रेडर समर्पण: छुट्टी परिदृश्य
बालिका लागि Mermaids बारेमा कार्टून
एक चिसो मा कान के भने राखिएको?
होटल "Sputnik" (मास्को): ठेगाना, ड्राइभिङ निर्देशनहरू, फोटो र समीक्षा
ईर्ष्या। ईर्ष्या लागि उपाय कसरी चयन गर्ने?
के रंग खैरो संयुक्त छ?